I-Fundy Retreat - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKate
'Isiqingatha' sabucala sendlu yasefama endala kakhulu ejongene neBay of Fundy. Isanda kulungiswa kwaye yabuyiselwa. Ilungile njengendawo yokubuyela umva okanye indawo yokuphumla ezolileyo engqongwe yimbali kunye nobuhle bendalo. (Umamkeli uhlala kwesinye isiqingatha.)
Zonke izinto zangaphakathi ezintsha, ziyilwe kakuhle kwaye zigcina umlingiswa wendlu. Kubalulekile ukwazi - amagumbi okulala ama-2 adityanisiwe. Igumbi elikhulu elikhuselwe ixesha lelanga le-3 lokutyela, ukuphumla kunye nokulala (i-queen foldout)
Ufikelelo lulonke kwiigadi. Hamba i-2k ukuya kuThomas' Cove - inxalenye ye "Fundy Cliffs Geopark".
Imonitha yesikrini inikezelwe ukusasaza kwisixhobo sakho, kodwa akukho tv yolwamkelo. Indawo yokupaka ngaphandle kwegadi kunye nomgama omfutshane ukusuka kwindlu. Le yindawo efanelekileyo yokuphumla apho unokulindela ukuba ungaphazanyiswa.
Lo mmandla uyinxalenye ye "Cliffs okanye iFundy Geopark" esandul' ukudalwa - ukuchongwa kweUNESCO yendawo ebaluleke kakhulu ngokwejoloji - Uphononongo olukhulu lweefosili kunye nokwakheka okukodwa kulo lonke unxweme. Zininzi iihambo ezimangalisayo kunye neelwandle ezinde ngamatye. Sine-avareji yamaza angama-45 eenyawo! kwiBhayi yaseFundy. Idrama kunye nembono eguqukayo rhoqo kwiiyure ezili-12 okanye njalo. Oku kuthetha ukuba iilwandle zisuka kumxinwa kakhulu ziye kububanzi obugqithisileyo kwaye kufuneka kuthathelwe ingqalelo indawo ozifumana ukuyo njengoko amanzi engena. Amaxesha amaza afikeleleka lula.
Ndihlala kwisakhiwo esinye kwaye ndiya kunceda ngeengcebiso zokujonga indawo, ukuthenga igrosari, kunye nazo naziphi na iimfuno ezivelayo.